घर युरोपियन स्टार मेसन माउन्ट बचपन स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
LB द्वारा मेसन माउन्ट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
एलबीले पूर्ण स्टोरीको एक फुटबल प्रतिभाशाली नाम प्रस्तुत गर्दछ "माउन्ट"हाम्रो मेसन माउन्ट चाइल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या his्कहरू तपाइँको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता लिएर आउँदछ।
मेसन माउन्ट बचपन कहानी- मितिमा विश्लेषण। ट्विटर र आईजी लाई क्रेडिट।
हो, सबैलाई थाहा छ कि उनले कल्पित को ज्ञान र विशेषज्ञता मा टेपिंग हुर्कनुभएको छ फ्रैंक लम्पर्ड। जे होस्, केहि थोरैले मेसन माउन्टको जीवनी विचार गर्दछ जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
मेसन माउन्ट बचपन स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरु गर्दै, उनका पूरा नामहरू मेसन टोनी माउन्ट हुन्। माउन्ट जनवरी 10 मा 1999th दिन उसको बुबा, टोनी माउन्ट र आमा (जसको नाम परिचित छ) पोर्ट्समाउथ, युनाइटेड किंगडममा जन्म भएको थियो। उसको बुवा उनको शुरुवाती 60 को हो जस्तो देखिन्छ जबकि उनको आमा उसको लेखमा सम्म उनको 40 लेट भएको जस्तो देखिन्छ।
मेसन माउन्ट प्यारेन्ट्स। आईजी र ट्विटरमा क्रेडिट
मेसन माउन्टको परिवारको उत्पत्ति इ England्ल्यान्डको बन्दरगाह शहर पोर्ट्समाउथबाट भएको हो र यो बेलायतको दोस्रो सबैभन्दा अधिक सघन जनसंख्या भएको शहर हो र साथै यो देशको सबैभन्दा ठूलो फलफूल ह्यान्डलिंग पोर्ट पनि हो। यसका व्यक्तिहरू जीवनको लागि उनीहरूको कठोरता र दृढ इच्छाशक्ति द्वारा चिनिन्छन्।
मेसन माउन्ट परिवार उत्पत्ति। WW247 र विश्व एटलसलाई क्रेडिट।
सार्वजनिक डोमेनबाट उपलब्ध जानकारीको आधारमा, यो देखिन्छ कि माउन्ट केवल आफ्ना आमा बुबाको लागि मात्र बच्चा बच्चा हो। उनी आफ्नी जेठी बहिनीसँग हुर्किए, जुन हाल विवाह भएको छ र आफ्नो पतिसँग अष्ट्रेलियामा बस्दछ, माउन्टका अभिभावकहरूको लागि मनपर्ने छुट्टी गन्तव्य।
माउन्ट फुटबल प्रेम गर्ने परिवारबाट मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिमा आएको थियो। उनका बुवाले जहाज निर्माणमा संलग्न हुनु भन्दा पनि कम प्रभावशाली फुटबल क्यारियर लिए र पछि कोचिंग कार्य गरे जसले उनको परिवारलाई खुवायो। माउंट स्नार वा टोनी (उसको वास्तविक नाम) एक पूर्व गैर-लीग खेलाडी थिए जो पछि हभन्त टाउन र न्यूपोर्टको प्रबन्धक बने।
मेसन माउन्ट बचपन स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
हुर्केका, मेसन माउन्टका आमाबुबाले भने कि उनी फुटबलको लागि असीम प्रेमको बावजुद शिक्षा पाउँदछन्। उसको बुबा टोनी (माउन्ट स्नर) लाई आफ्नो कम प्रभावशाली क्यारियरबाट अवकाशका साथ व्यवहार गर्न गाह्रो थियो। उनले आफ्नो छोरा माउण्ट मार्फत सपनाहरू बाँच्न कसम खाए।
प्रारम्भमा, चित्रित आनन्दित माउन्टले आफूलाई फुटबल प्रशिक्षणको लागि आफ्नो शिक्षामा सम्झौता नगरेकोमा धेरै राम्रो पायो। जो कोही उहाँलाई फिर्ता चिन्छन् कि ऊ बाँच्न र फुटबल सास फेर्न सक्छ।
समय बित्दै जाँदा, फुटबल शिक्षा प्राप्त गर्ने खोजी माउन्टको दिमागमा बढ्दै गयो। जबकि प्रत्येक गतिविधि कहिलेकाँही होल्ड मा राखिएको थियो, फुटबल खेल्न। माउन्टले आफ्नो बिभिन्न बिहान, दिउँसो र बेलुका पोर्ट्समाउथको फुटबल मैदानमा आफ्नो कौशल बनाउँथे।
मेसन माउन्ट शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप। ट्विटरमा क्रेडिट।
उनका परिवारका सबै सदस्यहरू जान्दछन् कि ऊ महान चीजहरूको लागि भाग्य हो किनकि उनीहरूले कहिलेकाँही उनलाई हेर्छन् र परीक्षणहरूमा भाग लिन सल्लाह दिन्थे।
यो समय लागेन, मेसन माउन्टले बोउरहन्ट एफसी, उनको शहरको स्थानीय एकेडेमीमा ट्रायलमा भाग लिन कल अप गर्यो। यस समयमा, आफ्नो प्यारो बुबाको गर्व को कुनै सीमा छैन थाहा थियो।
मेसन माउन्ट बचपन स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
उनको स्थानीय क्लबको लागि चार बर्षे उमेरको रूपमा6फुटबल खेल्ने क्रममा मेसन क्षमताले पोम्पी र चेल्सी एफसी नामका दुई शीर्ष क्लबहरूको ध्यानाकर्षण गर्‍यो। यद्यपि उनी local वर्षको उमेरमा चेल्सी पहिलो भएका थिए, जुन उनी बोउरहन्टको लागि खेल्दै थिए, उनको स्थानीय एकेडेमी।
माउन्टको उत्कटताले उनलाई चेल्सी एकेडेमी परीक्षणहरू पार गरिरहेको थियो र उनका बुवाले के भनेर चिनाएको "जोखिम"छनी उमेरमा चेन्सीमा सम्मिलित हुन, 2005 मा। किन जोखिम? !!. यो किनभने उसको बुवाले उनीहरुलाई चेल्सी एफसीको युवा एकेडेमी खेलाडीहरुलाई उनीहरुको वरिष्ठ टोलीमा स्नातक गर्न रुचि नभएको बारेमा चेतावनी दिएका थिए। यो समय हो क्लबले अधिग्रहण गरेको रोमन अब्रामोविच जो ठूलो शट किन्न मा रुचि थियो।
"उनको बच्चाको रूपमा चेतावनी थियो कि जोन टेरी एक मात्र खेलाडी हुन् जसले चेल्सीको युवा प्रणालीबाट भर्खरका वर्षहरूमा पहिलो टीममा स्नातक गरे। मेसनले निर्धक्क भई जवाफ दिए कि उनी अब अर्को मानिस हुनेछन्। ”
मेसन माउन्टका बुबाले एक पटक भने।
एकेडेमी खेल्ने दबाबको बाबजुद माउन्टले अझै शिक्षाको लागि प्रतिबद्धता देखायो किनकि उनी वाटरलूभिलको पूर्वाब्रुक पार्क स्कूलमा पढेका थिए जुन पोर्ट्समाउथको उत्तरमा 8 माईल उत्तरमा थियो।
चेल्सीको पहिलो टोलीमा पुग्ने अनौठ्य प्रेरणा पाउने तरिकाको रूपमा, सानो माउन्टले आफूले लि took्गेंडरीलाई भेट्ने हरेक अवसर लिए जॉन टेरी.
मेसन माउन्ट अर्ली क्यारियर मेमोरीहरू - एश्ले कोल र जोन टेरीलाई भेट्ने
माउन्ट केवल त्यहाँ रोकेनन्, उहाँ ठूलो हुनुभयो, उनले पनि प्रेरणादायी पाठ लिनुभयो डेविड लुइज, अर्को खेलाडी कहिल्यै हार नमान्ने मानसिकताका साथ जसलाई उनले आफ्नो मूर्ति पनि ठान्थे। उसलाई थोरै नै थाहा थियो र ऊ र Luiz दुबै दिन एक साथ साथी बन्ने थियो।
मेसन माउन्ट उनको टोली-साथी-डेभिड लुइजसँग भेट गर्दै
मेसन माउन्ट बचपन स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - सडकको प्रसिद्धि कथा
माउन्टले कहिल्यै चेल्सीको एकेडेमीमा प्रशिक्षण सत्र गुमाएन। स्कूलको पढाइले पनि उसलाई ध्यान गुमाउन सकेन किनकि उनी सँधै आफ्नो गृहकार्य मोस्टमैस्ट गर्दै थिए 8km लामो यात्रा सवारी प्रशिक्षणमा।
मेसन माउन्ट परिपक्व हुन थालेपछि उनले आफूलाई जीवनमा राम्रोसँग बसिरहेको देखेका थिए जुन एकेडेमीले उमेर समूहहरूमार्फत उत्कृष्ट खेलाडीहरूको रूपमा निर्मम प्रगति गर्दै आएका थिए।
उनी जीवन्त चेल्सी एकेडेमी युवाहरू मध्येका थिए जसले 2015 लाई 2017 मा हेडलाइट बनाए जब तिनीहरूले एफए युथ कप उठाए।
फेसन कथामा मेसन माउन्ट रोड
त्यहि सीजनमा, मेसन माउन्टले यूईएफए यूथ लिग र अर्को एफए युवा कप अर्को सीजन जित्यो।
उसको युवा क्यारियर सफलताले उनलाई इ the्ल्यान्ड अन्तर्गत 19 टीममा कल-अप कमायो। माउन्टले आफ्नो यूएक्सएनयूएमएक्स टीमका सहयोगीहरूलाई एक्सएनयूएमएक्समा प्रतिष्ठित यूईएफए यूरोपीयन च्याम्पियनशिप जित्न सहयोग पुर्‍यायो, सुनौलो खेलाडी र टिम टूर्नामेन्ट पुरस्कार कमाउँदै।
मेसन माउन्ट- प्रारम्भिक इ England्ल्यान्ड ग्लोरी। क्रेडिट यूईएफए
मेसन माउन्ट त्यो कठिन तथ्यलाई स्वीकार्न दबाबमा परे जुन एक पटक उसको बुवाबाट आएको चेतावनीको रूपमा आएको थियो। यदि तपाईं सम्झन सक्नुहुन्छ भने, उहाँ यो कुरा जान्न चाहनुहुन्थ्यो कि जोन टेरी एक मात्र एकेडेमी केटा थिए जसले विगत 20 वर्षमा यसलाई सफलतापूर्वक पहिलो टीम बनायो।
दुःखको कुरा, मेसन माउन्टलाई पहिलो टोली समावेशीकरणले अस्वीकार गर्‍यो जसले उनलाई अन्य धेरै चेल्सी एफसी लोन्नेहरूले गरे जस्तै theण विकल्प लिने निर्णय गर्न बाध्य तुल्यायो।
मेसन माउन्ट बचपन स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
माउन्ट डच एरिडिभिसी क्लब Vitese मा 24 जुलाई 2017 मा एक मौसम seasonण मा सामेल भयो। केवल क्लबले चाहेको हुनु युवा युवाको लागि आत्मविश्वासको कुरा हो जसलाई मन पराउछ Jadon Sancho नयाँ देशको नयाँ संस्कृति, प्रशिक्षण विधि र बानीमा पर्न आवश्यक पर्ने महसुस गरे।
मेसन माउन्ट राइज फेमिट विटेजसँग। क्रेडिट ESPN
मेसन माउन्टले तुरून्त क्लबको साथ पहिलो टीमको स्टार्टरको रूपमा प्रभाव पार्‍यो। आफ्नो पहिलो वर्ष मा, उसले 2017 – 18 सिजन को Vitesse प्लेयर पुरस्कार प्राप्त भयो। यो पुरस्कार जितेर डर्बीको पूर्व प्रबन्धक र चेल्सी किंवदन्ती आकर्षित भयो फ्रैंक लम्पर्ड जो त्यस समयमा डर्बीमा चेल्सी युवाहरूलाई आक्रमण गर्ने अभियानमा थिए।
जबकि अन्य शीर्ष च्याम्पियन लिग क्लबहरू जस्तै एजाक्स, पीएसभी आइन्डहोभनले चासो देखाए, माउन्टले डर्बीलाई आफ्नो संरक्षकलाई धन्यवाद हस्ताक्षर दिने निर्णय गरे, फ्रैंक लम्पर्ड। उनी रम््ससँग आफ्नो समयमा प्रभावित भए र क्लबलाई च्याम्पियनशिपमा पदोन्नति प्ले अफ जित्न मद्दत गर्ने प्रमुख खेलाडी थिए। लम्पार्डले उनलाई चेल्सीसँगको महिमाका दिनहरूमा अपनाएको शैलीमा उनको प्रशिक्षण दिए। यस अवधिमा माउन्ट उनको प्रिय व्यक्ति बने जसमा उनी राम्रै खुसी थिए।
मेसन माउन्ट-लैम्पर्ड्स प्रिय जसलाई उनी राम्ररी खुसी छ
मेसन माउन्टले लाम्पर्डलाई चेल्सीको लागि प्रस्थान गरेको देखेका थिए जसलाई उनी आफ्नो प्यारेन्ट क्लबमा फिर्ता जान्छन् र प्रमाणित गर्छन् कि उसले पहिलो टीममा प्रवेश गर्नेछ। त्यो प्रमाणित गर्ने एक मात्र तरिका प्रभावशाली 2019 पूर्व-सीजन थियो। 2019 प्रीसेसनको समयमा माउन्टको प्रभावशाली प्रदर्शनले चेल्सी फ्यानहरूलाई नयाँ विश्वास गर्‍यो फ्रैंक लम्पर्ड वास्तवमै ब्रिजमा आइपुगेको छ। वर्तमानमा लेखनको समय जस्तो माउन्टले उसको आशालाई पूरा गरिरहेको छ जसरी उसले ठूलो गोल गर्ने क्षमता देखाएको छ र ठूला क्लबका शीर्ष खेलाडीहरू उसको घुँडा टेकेर उसको ड्रिबल्सको साथ घुँडा टेक्दछ।
मेसन माउन्ट राइज टु फेम स्टोरी
मेसन माउन्टले कुनै श doubt्का बिना विश्वमा यो प्रमाणित गरेको छ कि ऊ पछि उनको अंग्रेजी मध्य मैदान पुस्ताको अर्को सुन्दर प्रतिज्ञाहरू हो फ्रैंक लम्पर्ड. बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
मेसन माउन्ट बचपन स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - सम्बन्ध जीवन
उनको ख्याति वृद्धि को साथ, हरेक चेल्सी प्रशंसक को मुख मा प्रश्न भएको छ; मेसन माउन्टको प्रेमिका को हो?…. त्यहाँ कुनै तथ्यलाई इन्कार गर्ने छैन जुन उसको सुन्दर देखिन्छ र उसको खेलको शैलीको कारण उनी महिला प्रशंसकहरूको लागि प्रिय हुनुहुन्न।
यद्यपि सफल फूटबलरको पछाडि क्लो Wealleans-Watts को सुन्दर व्यक्तिमा उनको प्रेमीको साथ चित्रण गरीएको एक ग्लैमरस WAG अवस्थित छ।
मेसन माउन्ट र गर्लफ्रेंड- क्लो वेलीन्स-वाट्स। आईजी लाई क्रेडिट
सामाजिक मिडियामा उनीहरूको असंख्य पोष्टको आधारमा, यो देखिन्छ कि दुबै प्रेमीहरूले ठोस आनन्द लिइरहेका छन् सम्बन्ध जो मैत्री मा निर्मित छ। माउन्ट र उनको प्रेमिका क्लो वेलीयन्स-वाट्सबीचको साझा प्रेम सार्वजनिक आँखाको छानबिनबाट बच्नको लागि हो किनभने उनको प्रेम जीवन नाटकमुक्त छ। दुबै प्रेमीहरूले केही समयको लागि डेटि। गर्दै रहेछ भन्ने तथ्यले विवाह अर्को औपचारिक चरण हुन सक्छ भन्ने कुरामा कुनै श .्का छैन।
मेसन माउन्ट बचपन स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - व्यक्तिगत जीवन
मेसन माउन्ट पर्सनल लाइफलाई चिन्नुले तपाईंलाई उसको व्यक्तिको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
मेसन माउन्टले दुई चीजलाई माया गर्दछ; पहिलो, जिम्मेवार हुनु र दोस्रो कुरा, आफ्नो समयको प्रबन्ध गर्नु। उहाँसँग स्वतन्त्रताको आन्तरिक अवस्था छ जसले उसलाई व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गर्न सक्षम तुल्याउँछ। माउन्टसँग यस विशाल आत्म-विश्वास र आफ्नो जीवनको लागि ठोस र यथार्थपरक योजनाहरू बनाउने क्षमता छ।
मेसन माउन्ट व्यक्तिगत जीवन तथ्यहरू। आईजी र ट्विटरमा क्रेडिट
धेरै युवा फुटबलरहरू जस्तो नभई, माउन्टले आफ्नो सम्बन्धको स्थिति लुकाउनमा विश्वास गर्दैन किनभने ऊ आफ्नो प्रेमिका को हो र आफ्ना आमा बुबालाई पनि चिन्ने दुनियाको बारेमा खुला छ। उनले अन्य युवा फुटबलरहरूको गल्तीबाट सिकेका छन् र आवश्यक परेको बेलामा आफ्नो दक्षता दिनको लागि तयार छन्।
मेसन माउन्ट बचपन स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - पारिवारिक जीवन
मेसन माउन्टले आफ्ना प्यारी आमाबुबाको साथसाथै इ England्गल्याण्डको पोर्ट्समाउथ शहरमा मेहनती व्यक्तिहरूको पनि उदाहरण दिए। आज, उहाँकी आमा, बुबा र दिदीबहिनी सबैले उसमा कडा र कहिल्यै हार नमान्ने मानसिकता राखेर फाइदा उठाइरहेका छन्।
मेसनका बुवा टोनी एके माउन्ट एसआरआरको विश्वास छ कि उनको छोराको पोर्ट्समाउथ पृष्ठभूमि र पालनपोषणले उसको आफ्नो क्यारियरको सुरुदेखि नै उसको शुरुआती क्यारियरमा एक धार दिएको छ।
मेसन माउन्ट र उनको बुबा
“तपाईं उहाँमा पोर्ट्समाउथ आक्रमणलाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्न, यद्यपि! मैले भन्नु पर्छ कि मेसन अझै पागल पोम्पी फ्यान हुन्, पूरा परिवार छ।
टोनी माउन्ट आफ्नो बुबा भने।
मेसन माउन्टको आमाको बारेमा: उनका श्रीमान जस्तो नभई, मेसन माउन्टको आमाले सार्वजनिक मान्यता नलगाउन सचेत छनौट गरेको छ। उनी हुन् सायद घरधनी जसले आफूलाई फुटबलमा यति धेरै नराख्ने मन पराउँछन् एक निजी र कम कुञ्जी जीवन।
मेसन माउन्ट र तिनका आमाहरू
मेसन माउन्ट बचपन स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - LifeStyle
हो, उसको वित्तीय सफलता फुटबलरको रूपमा उसको प्रदर्शनसँग सिधा बाँधिएको छ। लेख्ने समयमा जस्तै, मेसन माउन्टलाई भव्य जीवनशैली बाँच्न अनुमति छैन जस्तै पागल जस्तो खर्च गर्ने, विदेशी कारहरू किन्ने वा उसको जीवनशैली परिवर्तन गर्ने।
मेसन माउन्ट लाइफस्टाइल तथ्यहरू। क्रेडिट द टेलीग्राफ
मेसन माउन्ट ज्याला बढ्यो जुन उसको 2019 सम्झौताको नवीकरण पछि ग्लैमरस जीवनशैलीमा रूपान्तरण भएन। जे होस्, ऊसँग उसको प्यारो बरफको स्नान जस्तै घर भित्रै आवाश्यक पर्ने सबै चीजहरू छन्।
मेसन माउन्ट लाइफस्टाइल
मेसन माउन्ट बचपन स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - अनियमित तथ्यहरू
उहाँको श्रेष्ठ मित्र: मित्रता आउँछ र जान्छ। तर त्यसोभए त्यहाँ ती मित्रताहरू छन् जुन समयको परिक्षामा उभिन्छन्। एक धेरै राम्रो उदाहरण मेसन माउन्ट र बीच साझेदारी गरिएको 13 वर्ष भन्दा बढी मित्रता हो डेक्लान चावल.
मेसन माउन्ट अनटोल्ड तथ्यहरू- उहाँको दीर्घकालीन मित्रता।
माथि देखाईए अनुसार दुबै सफल फुटबलर हुन् र उनीहरूको बाल्यकालको दिनदेखि धेरै समानताहरू छन्। तिनीहरू एक साथ आफ्नो गर्लफ्रेंड संग गर्मी छुट्टिहरु, एक प्रमाण कसरी उनीहरूको मित्रता को शक्ति खर्च गर्न।
मेसन माउन्ट र डेक्लान राइस- द फ्रेंडशिप स्टोरी
जसरी चीजहरू जान्छन्, कसलाई थाहा छ, भाग्यले तिनीहरूलाई उहि क्लब र राष्ट्रिय टोलीमा ल्याउन सक्छ।
मेसन माउन्ट बचपन स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू - भिडियो सारांश
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो मेसन माउन्ट चाइल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।